Validator & Vagadziri
Chikumbiro cheMubatiri (N/A)
Bancc™️ iri kugadzira inotevera kuenda-kuenda chikuva Joinha isu pane inotevera FinTech rwendo rwezana ramakore. Zvevanhu, nevanhu. Whitepaper Chinjana & Tenga crypto ne0% mubhadharo BanccDex™️ ndeye yakasarudzika Exchange / Aggregator inounganidza ese akasiyana swaps paBinance Smart Chain (BSC), Ethereum (ETH) & Polygon network kuita imwechete application. VANHU APP Docs Tora kusvika pa500% APY paBanccStaking™️ BanccStaking™ ipuratifomu inomira iyo inopa akasiyana vault Beta, Alpha, Omega uye Valhalla. VANHU APP Docs BanccDAO™️ inokurudzira nharaunda kuita shanduko, kamwe chete BanccDAO™️ iDecentralized Governance Voting Application yeBancc™️ nharaunda kuti ipe zvikumbiro uye kuwana chiyero chekuti ingani chikumbiro chinodiwa. VANHU APP Docs Kufarira kubatana? Svika kwatiri nhasi uye isu tichagadzirisa chimwe chinhu chinobatsira mapato ese Taura nesu Docs
Bancc ikambani yeBlockchain iri kufamba nechikepe pakugadzira iyo inotevera yakatemerwa hupfumi papuratifomu nekuvhara mukaha uripo pakati petekinoroji iripo ine blockchain mikana.
Tenga sBanc pano!
Vezvenhau vepamusoro vanotiziva
Unogona kutiziva kubva...
Nhanho imwe panguva
Makore matatu mukugadzira
Bancc Ecosystem zvinhu
Musika wepasi rose & wecryptocurrency unogumira kune sarudzo dzemari dzinodhura uye dzinononoka kushandisa. Kusiya musika muhombe wakasara usina kubatwa. Kuve mupfupi kune dzimwe nzira dziri nani, ndizvo zvatanga takabatirira kusvika zvino…
Tumira Mari pasi rese mukati mesekondi imwe uchishandisa yedu app iri nyore kushandisa
Zvemari & Kutengeserana
Tengesa zviri nyore yako yaunofarira cryptocurrency neyedu nyore kushandisa app
Bhadhara neyako dhibhiti / kiredhiti BancCard™️ kana kubhadhara zvakananga neiyo cryptocurrency wallet. Mari yako, sarudzo yako
Seta chitoro chako chepamhepo nekudzvanya zvishoma neBancc™️ Marketplace
Bancc™️ Zvigadzirwa & Masevhisi
BanccSwap™️ inzvimbo yakatsinhana neyakaongororwa makondirakiti ekutanga kuvaka mari kune ari kuuya maviri eBanc tokeni seBUSD, USDT, WBNB kana kupa liquidity kune chero chiratidzo paBinance Smart Chain ecosystem.
BanccYield™️ ipuratifomu yekurima yegoho kuti iwe urime sBanc nenzira iri nyore uye inokurudzira. Ipa imwe yevaviri uye uwane mibairo musBanc.
BanccCEX™️ inzvimbo yepakati yekutsinhana kwaunokwanisa kutengesa kusvika ku160+ pairi nerutsigiro rwakakura rwemari yemamwe macryptocurrencies akadai seBitcoin, Ethereum, Dash nezvimwe. BanccCEX™️ chigadzirwa chakakosha muBancc™️ ecosystem uye haingope chete. kugona kwekutengesa asiwo kukweretesa / kukwereta sarudzo dzevashandisi kuwana pa.
BanccAccount™️ iakaundi yako wega kuti uve netarisiro yefiat yako uye cryptocurrency assets. Odha yako BancCard™️ uye wotanga kuchengetedza muripo pane zvese matransport kana waisa tokeni dzako muBancChain™️.
BanccNFT™️ ichave yakasarudzika uye shoma chikamu cheNFT's kuti vashandisi vatore maoko avo painozove neyakasiyana seti yemagadzirirwo emhando yeNFT yega yega. Iwo maficha achave pakati pemitsara yepre-odha yeanouya makadhi ekubhengi pasina muripo wekutengesa.
BanccPay™️ ndiyo yekubhadhara gedhi refiat mari uye cryptocurrencies. Gamuchira munhu wese kwese kwese Visa, MasterCard, American Express etc uye wozviendesa otomatiki kuburikidza neBanccCex™️ kufiat kana cryptocurrency.
BanccMerchant™️ ndeye yakazara-yakazara Point-ye-Kutengesa sisitimu yekupa kuchinjika uye nyore scalability kune chero mutengesi kugamuchira & kutanga kutengesa zvigadzirwa / masevhisi avo munyika, zvese online uye kunze kwenyika.
Interoperable uye Scalable
Transactions mukumhanya kwemheni & anosvika 10,000 Transactions pasekondi
Wana $BANC nekumhanya
iyo BancChain™️ inosimbisa
CEFI uye DEFI
Mari Yako, Mikana Yako
Chinjana neinopfuura 100+ assets cross-chain
Kuita mhinduro dziri nyore
Mushandisi Hushamwari Yakagadzirirwa Chero Chero Munhu
Imwe yezvatinotenda zvikuru ndeyekuti yega yega Crypto coin / tokeni inofanirwa kuve nekushandisa. Mapurojekiti mazhinji anopotsa chikamu ichocho asi isu hatidaro. $BANCC ichashandiswa papuratifomu yedu kugadzirisa dambudziko renyika chaiyo uye ndizvo zvinoita kuti tisiyane.
Mushandisi anotenga otomatiki Bancc.
Vashandisi vanotumira zvakatengwa
$Banc kumushandisi waunoda
FIAT KANA CRYPTO
Vashandisi vanogashira iyo banc uye vanogona kuchinjana kune chero fiat kana crypto
vanosarudza nemaoko kana kuti otomatiki.
Nyore & Yakaomarara
Pfungwa yekutanga yakagadzirwa. Isu taida kugadzira chigadzirwa chinogonesa kuyambuka muganhu kubhadhara nekukurumidza, nyore uye yakaderera mubhadharo pamusika. Tsvagiridzo yakagumisa kuti vanopa varipo vanopa masevhisi echinyakare, asina kuvimbika uye akakwira mutengo kune vashandisi. Takasvika kumhedziso yokuti kuitira kuti tipe chimwe chinhu chiri nani hatigoni kuva chete kune rimwe boka rehupfumi hwevanhu. Isu takasarudza kugadzirisa nekudzokorora yatinodaidza kuti "puratifomu".
$50K Mbeu Round Yakasimudzwa
Isu takabudirira neiyo $50K Mbeu kutenderera uye takawana imwe mari yekutanga kusimudzira kwepuratifomu. Kunopera kwa2021 takachinjanisa nekuvandudza tekinoroji yatinotenda kuti inodiwa kugadzira inodyidzana, inoshanda uye inosanganisira blockchain.
✅ - Kutengeswa Kweruzhinji paBinance Smart Chain (PinkSale)
✅ - Kubhengi & Cryptowallet
🚀- Huge Marketing campaign (Irikuenderera)
❇️ - Zvimwe zviri kuuya…
⚡️- Nzvimbo-ye-Kutengesa Sitimu
⚡️- Ipuratifomu yekupedzisira ine zvese zvigadzirwa pamusoro kuita imwechete application
Isu tiri chikonzero chekuti Crypto ichave yakakosha. Zvikanganiso zvebhizimisi rekubhadhara zvave kuda kuva chiyeuchidzo chekare. Yave nguva yekuti crypto iite izvo crypto yakagadzirirwa kuita - kugadzirisa matambudziko epasirese. Nemari yedu yemadhora yeBANCC uye zvese zvinouya nayo - tinotenda kuti tiri ramangwana reindasitiri yekubhadhara uye tiri kukukoka iwe parwendo.
Muvambi & Chief Technology Officer
Anga ari munzvimbo ye crypto kubva pazera re13 uye akasika pamakore gumi nemana bhizinesi rake rekutanga naBenjamin, kuvaka mawebhusaiti uye maapplication. Ane ruzivo rwakanyanya uye rwakakosha ruzivo rwe blockchain development, economics uye zvivakwa zvekuvaka tekinoroji yepamusoro. Iye chikamu chakakosha pakuvaka Bancc kubudirira.
Benjamin parizvino inyanzvi yemumhanyi uye investor muzvivakwa, masheya uye crypto. Benjamin mudiki mubatsiri mune online crypto casino. Benjamin akatanga kambani yake yekutanga aine makore 15 okuzvarwa naNils-Julius uye ane ziso rakanaka rekuona mikana iyo vamwe vasingaione.
Isak anga ari muchengeti wezvivakwa akabudirira kubva pazera re18 uye zvino ndiye CEO wekambani yakabudirira yekuveza. Isak ane mano akanaka ekutsoropodza zvinhu uye kuona zvinhu nemaonero akasiyana. Neruzivo rwakakura rwehupfumi uye kufunga kwakadzama Isak anoziva zvinotora kuita bhizinesi rakabudirira.
Oskar ichangopedzwa yakazara stack mugadziri. Oskar ane ziso rakanaka rekugadzira nekugadzira mawebhusaiti, maapplication uye zvese zvinouya nemaitiro ekuita kudaro. Oskar ichave yakanakisa tsigiro yekugadzira uye kutungamira dhizaini yeBancc chikuva.
Mirian ndeyekuwedzera kukuru kuchikwata, nehunyanzvi uye hune hungwaru hwekushambadzira. Mirian achaseta, kusimudzira uye kutarisira kushambadzira kweBancc. Mirian anotaura Chirungu nechiSpanish zvakanaka uye nehunyanzvi hwake hwemitauro miviri Bancc inogona kusvika kune vakatowanda vashandisi nerutsigiro, zvemukati & magariro enhau.
TC-Crypto vane ruzivo rwakareba neNetwork kugadzirisa uye kuseta muindasitiri yenhare. TC-Crypto yanga iinesu chaizvo kubva pazuva rekutanga uye anga achishuvira uye achifarira zvikuru chirongwa ichi. Isu tinoona kugona kukuru neruzivo rwake uye hunyanzvi hweiyo yakawanda hardware / software chikamu che blockchain.
Nick ane shungu huru ye crypto neBancc. Neruzivo rwake rwekare mukushambadzira & kudyidzana. Nick achange achitarisa pakuparadzira ruzivo rwepurojekiti kuburikidza nekushambadzirana kwekushambadzira uye nekutsvaga hukuru hwekudyidzana.
Raza munyori wechinyorwa akanakisa uye anoda cryptocurrency zvekuti akatanga kunyora nezvazvo. Kubva kuPakistan, Raza ndiye achave wekutanga munyori anotungamira weBancc, achivandudza nharaunda nemagariro enhau nezvezvinhu zvinofadza zviri kuuya!
Ita shuwa yekujoinha uye kutora chikamu muvhiki nevhiki AMA zvikamu!
Bancc ™ inogona sei kukwikwidza neCrypto.com, Binance nezvimwe?
Pfungwa huru kuseri kwekambani yese yakabudirira iri kutarisa purofiti hongu. Musiyano mukuru uripo pakati peBancc™️ nemakambani aya ndewekuti makambani aya anoda kuunza mari yakakwira sezvinobvira kune vagovani vavo uye vanovabvumira vanoonekwa sevadyidzani mukati mekambani yavo zano uye modhi yemari. Bancc inounza mhando imwechete yemari yemari asi yeziso "reruzhinji". Kuderedza mari yese yeBancc uye kuiwedzera kune vatori vechikamu mu blockchain.
Ko Bancc™️ ingaita sei zvese izvi zvinhu?
Tekinoroji chikamu chinonakidza chekushanduka-shanduka uye sezvatakaona neBitcoin, kunyanya makore gumi apfuura. Zvinhu zviri kutanga kushanduka nekumhanya kukuru kupfuura nakare kose. Bancc yakavambwa pakutenda kuti tekinoroji inofanirwa kuwanikwa nemunhu wese uye kuita kuti zviome kuti vashandisi vabatane nayo haisi iyo nzira yatinotenda kuti ndeyechokwadi. Nekubatanidza matekinoroji aripo ane nhoroondo yapfuura inoratidza kugadzikana uye nzvimbo yekukura Bancc™️, inozokwanisa kuvhara mukaha pakati pezviridzwa zvebhangi zvenguva dzose uye cryptocurrency mamiriro.
Sei Bancc ichidiwa?
Nyika iri kuchinja uye cryptocurrency iri pano kugara. Chinhu chimwe chete, mubhadharo. Kana iwe ukazvitarisa kune vese vashandisi iyo semuenzaniso inoshandisa remittance services. Fees zvimwe zvakafanana. Hapana anoda kushandira mahara asi kubhadharisa mari zhinji kunokuvadza kukura kwenetiweki. Kutumira 10 $ yekukosha hakufanire kunge kuri kuita makumi matanhatu emadhora panguva yekutanga. Veruzhinji vachange vachida chimwe chinhu chisingadhure uye chiri nyore kushandisa pane masevhisi ari kupihwa nhasi. Bancc™️ inogadzirisa dambudziko iri nenzira yakasarudzika nekugadzira hupfumi hune hutano uye hwakasimba husingavimbi nechikamu chimwe chete, asi vese vashandisi mune network.
Nyorera kutsamba yenhau nhasi.
Ita shuwa kuti unogara wakagadziridzwa pazvinhu zviri kuitika kuBancc, ivepo kana kuti mativi.
Imba Iye Zvino
Nekusaina, unobvumirana neyedu Terms & Services.
Zita rechiratidzo - Bancc
Mubayiro Chiratidzo - BTC
BuyBack Fee - 0% (Manual Burns)
Mari yekufungisisa - 7%
Mari yekushambadzira - 3%
MURIPO WESE – 11%
Zvigadzirwa & Services